Harvey nwere ike iti Texas na Fraịde a ka Ajọ Ifufe | Network Meteorology
Harvey nwere ike iti Texas na Fraịde a ka ajọ ifufe
Harvey dị ugbu a, dị ka obi ịda mba nke ebe okpomọkụ
Ugbu a Harvey dị ka obi ịda mba nke ebe okpomọkụ na mmiri nke Ọwara Oké Osimiri Mexico mgbe ha megharịrị. Ihe kachasị egwu bụ na ọ nwere ike ibute United States dị ka ajọ ifufe. Ugbu a na-akpụ akpụ na n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ na ọsọ nke 15km / h. Ọ dị n’ebe dị anya nke 800km site na Port Oconnor, Texas, na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ.
A na-enyocha akụkụ nke ụsọ oké osimiri Mexico na Steeti Texas n'ihi oké ifufe ahụ, nke ọzọ edere n'akụkụ ugwu Texas hurricane watch ugbu a. Dika usoro ntuziaka ya si di, Harvey na-aga Texas n'ụsọ oké ehihie Friday. Mmiri mmiri ozuzo nke Harvey na-atụ nwere ike ibute ide mmiri ma bụrụ ihe dị egwu nye ndị mmadụ, ndị ọkachamara kwuru.
Zọ Harvey ga-eme n’ọdịnihu
Maka elekere 48/72 na-esote, Harvey ga-abụ ajọ ifufe dịka amụma ahụ si dị
Dabere na atụmatụ enwere ike ịme, nke a na-ahụ anya na oyiyi ahụ, oke mmiri ozuzo ga-adaba n’ebe ndị na-adịkarị akọrọ. Ọ ga - ebute nnukwu ebili mmiri na ebili mmiri nke ga - emetụta ụsọ mmiri Texas, Louisiana, na northheast Mexico. Okwesiri ighota na mbido Harvey di na ndi ozo nke oke mmiri oku nke emere na izu gara aga na Caribbean.
Oge nke itoolu nke ajọ ifufe a na Caribbean malitere na Eprel, ya na Tropical Storm Arlene. O mere otu ọnwa tupu oge mbụ. Onye a sokwa ndị ọzọ, dị ka Bret, Cindy, ajọ ifufe ọzọ nke na-agaghị akpọ ya, Don, Emily na Franklin, nke anyị na-ekwu banyere ya.
Oge ajọ ifufe nke na-amalite na June 1 wee kwụsị na November 30, nwere ruo taa oké ifufe 8, nkụda mmụọ 8, ajọ ifufe 2, nke 3 n'ime ha emeela ala. Anyị ga-aga n'ihu na-ekwu banyere ihe ọ bụla merenụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ifufe » Harvey nwere ike iti Texas na Fraịde a ka ajọ ifufe
NOAA si Greenhouse Gas Index gbagoro 40% kemgbe 1990
Ọzara Atacama yiri okooko osisi